Si rasmi ah ayaa loo soo saaray Android-kii ugu dambeeyay: Android L Laga soo bilaabo Linux
Android L: Mustaqbalka Android si rasmi ah ayaa loo soo bandhigay
Waxaan ku dhawaaqayaa maqaal aad u fiican oo lagu daabacay aadanaha, dabcan waxyaabo shakhsiyadeed qaarkood.
7-dii ama 8-dii sano ee la soo dhaafay waa inaan barto in noocyada nidaamyadu aysan ahayn oo keliya lambarka nooca, laakiin sidoo kale magac (codename). Waxaan ula jeedaa, tusaale ahaan, noocyada Ubuntu waxay leeyihiin tiradooda (Ex. 10.04) iyo magacaaga (Eg Lucid Lynx, xayawaanka halista ugu jira baabi'inta), isla waxay ku dhacdaa Debian (Qosol, zurgiwm, jilayaasha Toy Story), oo sidaas ayaan u abuuraa dhammaan Linux distros.
Android Ma ahan wax ka yar, waxay sidoo kale siinaysaa magac macaan ama nacnac nooc kasta. Dhammaan magacyadan ayaa mararka qaarkood sameeya xitaa waxaan la yaabanahay ta aniga iska leh, mararka qaarkood xitaa iyadoo la adeegsanayo caqli gal ama aan raadinayo meel macnaha magacyada si aad iiga caawiso inaan isla fahmo wax yar. Muhiimadu waxay tahay hada waxaan helnay Google oo leh "magac" ka duwan wixii aan ku baran jirnay.
1 Android L… mustaqbalka Android
2 Midab leh, muuqaal leh oo isku dhafan
3 Isticmaalka iyo Helitaanka
4 Android meel kasta
5 Naqshadeynta wanaagsan, isticmaalka batteriga oo hooseeya iyo amniga oo sareeya.
6 Google wuxuu muujinayaa waxa Android L awood u yeelan doono
7 Xusuusin Muhiim ah
8 Sawiro la isbarbar dhigo
9 Dhamaadka maqaalka
Android L… mustaqbalka Android
Google ayaa hadda soo bandhigtay waxa noqon doona nooca xiga ee Android Shirkiisii ​​hore ee caanka ahaa ee loogu talagalay horumariyeyaasha (Google I / O) Sundar Pichai, madaxweyne ku xigeenka Google iyo kormeeraha Android, Chrome iyo Google Apps, wuxuu tixraacay qaabkan cusub oo leh magaca Android L, oo ah waji dhab ah oo loogu talagalay nidaamka hawlgalka oo leh saamiga ugu weyn ee suuqa, oo hadda ku raaxeysanaya hal bilyan oo isticmaale firfircoon adduunka oo dhan, sida uu qabo Pichai laftiisa.
Android L Shaki la'aan wuxuu ahaa xiddigga kulanka oo socday ku dhowaad saddex saacadood, in kasta oo waxa la muujiyay uusan ahayn nooca ugu dambeeya ee nidaamka mobilada ee Google, kaasoo la filayo inuu suuqa soo galo dhammaadka sanadka, haddana wuxuu noqonayaa kii ugu horreeyay horumar aad u muhiim ah, fiiro gaar ah u leh isbeddelka xagjirka ah ee ay ku sameeyeen Google, oo leh gabi ahaanba ka duwan oo aad u xiisa badan.
Midab leh, muuqaal leh oo isku dhafan
Matias Duarte ayaa mas'uul ka ah mar labaad naqshadeynta is-dhexgalka adeegsadaha ee Android, Waxyaabaha Design Waa natiijada ugu dambaysay ee shaqada ee dad badani u arkaan inay tahay mid aan fiicnayn; interface ah sida midabo iyo noole sida ay tahay nadiif ah oo la safeeyey. Xitaa kala-guurka iyo animations-ka hal shaashad illaa shaashad kale ayaa si wanaagsan loogu dhejiyay Android L.
El ka beddel nooca hadda jira ee Android 4.4 KitKat illaa Android L waa sida in xitaa design ka mid ah badhamada xakameynaya is-dhexgalka oo ku yaal salka shaashadda hoosteeda ayaa jiray gebi ahaanba wax laga beddelay, Mar labaad dayactirka isbeddelkaas oo ah inuu yahay mid nadiif ah oo aad u yar sidii ay u soo jiidanayeen.
Ugu dambeyntiina, Android L cusub ayaa sidoo kale hagaajineysa nidaamka ogeysiinta ama xarunta, xitaa u qaadashada shaashadda qufulka, iyo mashiinka dalwada ee dalvik ugu beddel ART-da cusub taas oo horeyba uga tijaabin jirtay Android KitKat, laakiin hadda waxay noqon doontaa mida maamusha nidaamka asal ahaan, iyadoo siineysa awood yar isticmaalka iyo iswaafajinta buuxda qaab dhismeedka gelinno 64.
Isticmaalka iyo Helitaanka
Laakiin Android L kaliya maahan wax qurux badan, hawlgalkeedu wuxuu u muuqdaa mid aad u fiican, tilmaam cusub oo taabasho ah, animations, iyo ogeysiisyo cusub oo helay daaweyn gaar ah. Tani waa la muujiyay Dave burke, Agaasimaha Injineerka Android.
Android meel kasta
Google kuma koobna inay muujiso waxa mustaqbalka Android on casriga ah iyo kiniiniyada, laakiin sidoo kale waxay mar kale muujisay hamigeeda inay keento madal meel kasta, laga bilaabo kombiyuutarka ilaa saacadda, ilaa baabuur.
Android Car waxaa lagu soo dalacay inay tahay fidinta ugu fiican ee adeegyada Google iyo codsiyada la keeno gawaarida. Qalabkan cusub, taleefannada casriga ah ee leh 'Android L' ayaa la jaan qaadaya gaariga oo ku bixin doona, iyada oo loo marayo shaashadda guddiheeda, helitaanka Khariidadaha Google iyo nidaamkeeda GPS navigation, muusikada Google Play Music, iyo xitaa suurtagalnimada wicitaanada, dirista fariimaha qoraalka iyo sameynta qoraallada adoo adeegsanaya Google Keep, kaliya isticmaalka codkeena, jawaab cad macruufka gaariga kaas oo sida ay sheegtay Google horay u lahaa 40 soo saare gawaari sida Wada-hawlgalayaasha mashruucan.
Android sidoo kale waxaa loo keenay, qaab ahaan, laptop-yada Chromebook iyo Chrome OS, oo kuu oggolaanaya inaad maamusho ogeysiisyada moobiilka ee shaashadda iyo xitaa aad u sii fog, adoo awood u leh inaad ku socodsiiso barnaamijyada Android ee ku jira Chromebook asal ahaan.
Iyaguna way soo bandhigeen TV Android, taas oo loo isticmaali karo labadaba a sanduuqa dusha sare, ama ku jira a smart TV laga bilaabo qaar ka mid ah noocyada kala duwan ee iskaashiga la leh shirkadda weyn ee internetka si ay u bilaabaan telefishanka ku shaqeeya nidaamkan TV-ga Android wuxuu leeyahay muuqaal aad uqurux badan, wuxuuna bixiyaa marin u helka barnaamijyada, filimada iyo ciyaaraha iyadoo la adeegsanayo socodka ama codsi ahaan.
Mid kale oo ka mid ah ogeysiisyada soo jiitay dareenka ayaa ahaa kii ugu horreeyay ee rasmiga ah iyo banaanbaxa intii lagu jiray Google I / O 2014 ee Android Wear, Barmaamijka Google ee loogu talagalay smartwatches, iyo saddexda nooc ee ugu horreeya ee suuqa ku dhufan doona nidaamkan: LG G Watch, Samsung Gear Toos ah iyo Motorola Moto 360.
Kuwaas oo dhan "saacadaha smart" waxay u adeegi doonaan sidii fidinta mobilada si ay u helaan oo ay xitaa uga jawaabaan ogeysiisyada fariimaha qoraalka ah ama shabakadaha bulshada, emayllada, hubi cimilada, kalandarka iyo xitaa, markale, faallooyin ku samee codka.
Naqshadeynta wanaagsan, isticmaalka batteriga oo hooseeya iyo amniga oo sareeya.
Xirmada Fidinta Android ayaa mas'uul ka noqon doona hagaajinta awoodda garaafka ee ciyaaraha, dib u soo nooleynta joomatariyo hore loogu arkay kombuyuutarka oo keliya. Cusboonaysiinta kale ee xisaabta lagu darsan karaa waa Mashruuca Volta, oo ah mashruuc ay soo saartay Google si loo soo afjaro dhibaatada ka jirta nolosha bateriga ee aan hadda ku haysano taleefannada casriga ah iyadoo loo marayo qaabab tamar cusub lagu keydiyo.
Faahfaahin kale ayaa sidoo kale lagu daray, sida nidaamka lagu ogaanayo qofka uu isku dayayo inuu furo aaladda, ogeysiisyo caqli badan oo looga jawaabi karo shaashadda furitaanka marka lagu daro Heads up. Hab cusub oo lagu furo terminaalka ayaa sidoo kale lagu soo daray, maaddaama moobiilku ogaan doono haddii aad ku xidhan tahay aaladda casriga ah ee loo yaqaan 'Android Wear', taas oo siinaysa suurtagalnimada in aad habayn ku furto smartwatch si aad u hesho nabadgelyo weyn.
Tilmaamo cusub ayaa sidoo kale u imanaya biraawsarka Chrome, oo leh horumarin ku saabsan xulashooyinka animation iyo qaabeynta bogagga shabakadda moobiilka. Google waxay rabaan inay helaan horumariyeyaal si ay uga dhigaan shabakadaha moobiilka dhaqso iyo dareen badan.
Ugu dambeyntiina, waxaa lagu xusay in Android L uu ka badbaado badnaan doono malware, iyadoo toddobaad kasta la cusbooneysiiyo amniga. Nidaamka cusub ee qalliinka ayaa maanta loo heli karaa horumariyeyaasha oo keliya iyo qalabka Nexus 5 iyo Nexus 7. Wuxuu ku darayaa in ka badan 5.000 oo API-da cusub ah wuxuuna ballan-qaadayaa inuu noqon doono kacaan dhab ah suuqa suuqyada ee nidaamyada hawlgalka moobiilka.
Google wuxuu muujinayaa waxa Android L awood u yeelan doono
Isqabsi, waa demo lagu sameeyay Aan macquul ahayn 4 ku shaqeeya qalab wata processor Nvidia Tegra K1 taas oo iyaduna ay taageerto AEP (Xidhmada Kordhinta ee Android), set-ka cusub ee API-yada awood u leh inay kordhiyaan shaqeynta FurGL ES 3.1. Demo-kan waxaa loo adeegsaday Google tusaale ahaan awoodaha garaafyada ee nooca cusub ee Android yeelan doono.
War weyn ayaa sugaya dadka isticmaala Android, xitaa suuqyada soo ifbaxaya, ee wata barnaamijka cusub Android One Waxay sidoo kale heli doonaan noocyo kala duwan oo taleefannada casriga ah ah oo leh qiime aad u soo jiidasho leh, iyagoo ku dayanaya ficilada sida kuwa Firefox OS, kuwaas oo markii horaba bartilmaameedsanayay suuqan.
Xusuusin Muhiim ah
Waxaad ka arki kartaa Muhiimad buuxda halkan:
Iyo haddii aad rabto inaad soo dejiso (1.4Gb qiyaastii) waad jiidi kartaa amarka:
Sawiro la isbarbar dhigo
Shakhsiyan, Android L ayaa dareenkeyga soo jiita, waxaan u arkaa kaliya ma ahan muuqaal soo jiidasho leh laakiin sidoo kale rajo gudaha ah, si aan u arko haddii ay hagaajineyso waxqabadka nidaamka aaladaha hoose iyo kuwa dhexe, ilaa aad ka heysato 4 gees ama wax la mid ah Android ( cad shaqsiyeed cad) sifiican uma shaqeeyo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Android L: Mustaqbalka Android si rasmi ah ayaa loo soo bandhigay
24 faallooyin, ka tag taada
Maqaalka si qoto dheer uma daboolayo beddelka Dalvik ee Farshaxanka, laakiin sida ku xusan waxa aan ka akhriyay internetka, waxqabadka wuxuu hagaajiyaa ku dhowaad 50%, in kasta oo dhinaca kale ah, loo baahan yahay karti dheeri ah sababta oo ah habka aad u soo ururiso codsiyada ama wax la mid ah.
Maxaan ka dhihi karaa qeybta muuqaalka? Waan jeclahay Waa markii iigu horreysay ee aan rabo inaan helo Android.
Waxaan sugayaa Xusuusin 4, laakiin marwalba waxaan haystaa hoos u dhac in ay la socdaan cusbooneysiinta waxaanan jeclaan lahaa inaan isku dayo waxaas oo dhan, markaan fiiriyo waxaa soo baxaya xanta u muuqata inay waxyaabo aad u xiiso badan ka dusay Nexus 6, taas oo noqon laheyd oo ay soo saartay motorola (hada laga bilaabo lenovo), hadii taasi runtahay, afkaygu wuxuu waraabin lahaa xD
Kaliya waxaan rabaa noocayadayda 'Galaxy S T-Mobile' (waa Galaxy kaliya ee i qancisay). Sidoo kale, haddii CyanogenMod ay maamusho fargeeto sida ugu dhakhsaha badan uguna wanaagsan ee suuragalka ah, markaa waxaan wajihi doonnaa nooc gebi ahaanba deggan oo Android ah.
PS: Browsers-ka aaladaha casriga ah ee adeegsada Blink ama Webkit sida Chrome ama Opera Blink looma gudbin Galaxy Mini, xitaa Firefox OS ma lahan deked rasmi ah oo taleefankayga hooseeya.
albert aniga dijo
Waxaan haystay ART maalintii ugu horaysay wax dhib ahna kuma qabo Nexuskayga 4. Ama isticmaalayaashu waxay waydiistaan ​​isbedelka ama waligeed lama qaban doono
Ku jawaab albert I
ART miyuu u shaqeyn doonaa Galaxy Mini-ga? Sababtoo ah waxaan taaganahay kubbadaha Davlik.
Haddii aad fiirin kartid MIUI v5 rom, waxay leedahay muuqaalka ugu fiican dhammaan qeybiyeyaasha hadda jira ee Android. Waxay sidoo kale la imaaneysaa halbeeg leh mowduuc maareeye kuu ah oo kuu oggolaanaya inaad soo dejiso tiro aan badnayn, oo waxaan kuu xaqiijinayaa in midkoodna uusan ahayn xishoodka caadiga ah ee uu sameeyo isticmaale goob kasta. Taas bedelkeeda, tayada iyo dhadhanka wanaagsan.
Ku jawaab DAyara
ajam waa in dalvik uu yahay qashin-kheyraad
Wax kale maahan ka qaadista Dalvik ayaa ka dhigeysa mid qiimo leh. By the way, qof ayaa horey u geeyay kumbuyuutarka dhammaan Android laga bilaabo 4.0 iyo wixii ka dambeeya:
Google on mobile, Google on computer, Google on baabuur, Google on tv, Google on watch. Toban sano gudahood, Google ayaa waxbadan iga ogaan doonta aniga naftayda .. 😉
Waxaan u maleynayaa in haddii aan waligey ku xanuunsado xusuusta iga waa inaan google taariikhdeyda xasuustaa .. 😀
Asal ahaan haa, Google meel walba ayuu joogaa macluumaadkeenuna waa iyaga: /, waa inaad ku noolaataa taas.
Google, Google Meelkasta.
Naqshad cusub oo weyn, iyo habka blog-ku u fiican yahay
ma jiraa qof og goorta ay gacmaheena ku jiri doonto?
4kastoo aamin ah dijo
Waxaa loo maleynayaa in Oktoobar 🙂
Ujawaabi 4ever Muumin
Jolla mudane, ESE waa mustaqbalka taleefannada casriga ah: Linux kernel 3.4, Qt5, systemd, Btrfs, Wayland, ssh iyo root console marka la eego, iswaafajinta udhaxeysa barnaamijyada Android iyo isdhaafsiga asalka ah ee barnaamijyada FF OS.
My Galaxy S4 wuxuu noqday mid la isticmaali karo markii aan awooday inaan xidido oo aan dhigo ROM caadadiisu tahay ka faa'iideysiga xalinta shaashadda buuxda (SlimROM), laakiin Android wali waa Android… way nuugtaa !!!
Sida ay ku yiraahdaan taxanaha Silicon Valley, had iyo jeer maahan wax soo saarka ugu hal abuurka badan kuwa guuleysta.
Ku jawaab urKh
Kiis kaamil ah sheegashadaas waa Apple.
Marka la eego jolla waxaan rajeynayaa inay run tahay, laakiin waan ka shakisanahay….
iyo ku saabsan s4 iyo dhamaan waxyaabaha samsung waxaan dhihi karaa kaliya hal shay, way urayaan!
Kuma eedeyn kartid android, iyo wax kayar hadaan xisaabta ku dareyno lakabka fiicnaanta liidata ee alaabada Samsung ay leeyihiin; Haddii aadan i rumaysanayn, qaado NEXUS 5 oo isbarbar dhig S4-kaaga, ka dib markaad taas sameyso, ii sheeg haddii Android yahay nidaam hawlgal oo wanaagsan iyo in kale, Samsung ayaa ah tan ugu fog xulashada ugu xun haddii aad rabto inaad ku raaxaysato waxqabadka dhabta ah ee Android.
Ku jawaab befa
Xaaladdayda, Galaxy Mini-ka aan ku shaqeynayo ee 'GT-S5570B' waa inuu iska casilaa CM 7.2 maxaa yeelay xitaa CM 10.2 si sax ah uma shaqeynayo (AOSP ahaan, runtii wuu nuugaa maxaa yeelay batteriga ayuu ka sii shubayaa isla markaana wuxuu ka dhaxlayaa dhibaatooyin la mid ah tan CM ee is-hoosaysiinta boosteejada).
Markaan arko, waan rumaystaa.
Ivan Molina Rebolledo dijo
Android waxaa loogu talagalay Nexus (Iyo Motorola (Kahor inta aan loo iibin Lenovo)) ..
macruufka iDevices ..
Windows Phone loogu talagalay Microsoft Mobile (Kahor Nokia…) ..
Tizen ee Samsung ..
Sailfish OS oo loogu talagalay Jolla ..
Firefox OS ee Mozilla Olol? ..
Nidaam kasta si habsami leh ayuu ula shaqeeyaa adiga.
Jawaab Ivan Molina Rebolledo
Waa in la cadeeyaa in Nexus ay yihiin LG… .. XD
Hadda waxaan ahay isticmaale LG G2, waxaan ahaa isticmaale Nexus 5 (hooyaday ayaan siiyay)
Aniguna waxaan kuu sheegayaa in qoraalkaagu aanu gebi ahaanba run ahayn, waxaa jira terminaallo badan oo heer sare ah oo ku jira android, kuwaas oo aan Motorola, iyo LG midna ahayn, dhibaatada ugu weyn ee ku dhacda android-ka, waana mid waligeedna ahayd, SAMSUNG, dadku way arkaan sumaddan waalaan, xitaa way iibsadaan, iyaga oo aan fiiro gaar ah u lahayn waxqabadkooda, hadaadan i rumaysanaynin, qaado khadka dhexe ee Xiaomi Red Rice (CHINESE terminal), waxay u dhigantaa mid la mid ah ama ka yar motog, waxayna leedahay waxqabad ka wanaagsan midka GALAXY S4, halkaas ayaad tagtaa Waxaan uga tagayaa XD
Waxaan jeclaan lahaa inay soo baxaan wax sida Swift oo kale ah.
ma aniga baa mise interface-ka cusubi wax yar buu ku leeyahay metro / moder-ui?
waxa kaliya ee aniga xiisaha ii ahaa wuxuu ahaa isbeddelka dalvik ilaa farshaxanka, waxaan horeyba uga lumay aaminka android-ka oo aan aqoon fiican u lahayn. Waxaan rajeynayaa in farshaxanka uu xaliyo dhibaatadaas hal mar iyo dhan
30% qiimo dhimis buugaagta loogu talagalay Shahaadada LPIC